မည်သူမဆို ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရကြောင်း သံသယရှိလျှင် Quarantine Zone သို့ သွားကြရမည်။ ငြင်းဆန်လျှင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဖြင့် အတင်းအကြပ်ရွှေ့ပြောင်းမည်ဟု တရုတ်အစိုးရ အမိန့်ထုတ်။ ဗီယက်နမ်က လူထုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အရေးပေါ်ကြေညာ၊ ဗီယက်နမ်နှင့်အင်ဒိုနီးရှားတို့က တရုတ်နှင့် ဝင်ထွက်လေယာဉ်အားလုံးကို တားမြစ် – H2Oupdatenews
မည်သူမဆို ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရကြောင်း သံသယရှိလျှင် Quarantine Zone သို့ သွားကြရမည်။ ငြင်းဆန်လျှင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဖြင့် အတင်းအကြပ်ရွှေ့ပြောင်းမည်ဟု တရုတ်အစိုးရ အမိန့်ထုတ်။ ဗီယက်နမ်က လူထုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အရေးပေါ်ကြေညာ၊ ဗီယက်နမ်နှင့်အင်ဒိုနီးရှားတို့က တရုတ်နှင့် ဝင်ထွက်လေယာဉ်အားလုံးကို တားမြစ်
oungmarine11@outlook.com 02/02/2020	No Comments
တရုတ်နိုင်ငံ ဟူဘေးပြည်နယ်၌ ဖျားနာ-သေဆုံးနှုန်းများ သိသာစွာ မြင့်တက်လျှက်ရှိစဉ် ဝူဟန်မြို့နေ 2109 n-CoV နိုဗဲလ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရသည်ဟု Suspected သံသယရှိသူတို့သည် Quarantine Zone သို့ သွားကြရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ငြင်းဆန်လျှင် ရဲတပ်ဖွဲဖြင့် အတင်းအကြပ်အင်အားသုံးကာ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းခံရလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က ကြေညာသည်ဟု South China Morning Post က ယနေ့ရေးသားသည်။
ကူးစက်ဗိုင်းရပ်ရောဂါကျရောက်နေသည့် ဝူဟန်မြို့၌ ရောဂါကူးစက်ကြောင်း အတည်ပြုခံရသူ ယခင် ၈၉၄-ဦးရှိရာမှ စနေနေ့တွင် ၄၁၀၉-ဦးသို့ တိုးမြင့်လာသည်။ အလားတူပင် လူသေဆုံးမှုမှာ ယခင် ၃၂-ဦးရှိရာမှ ၂၂၄-ဦးအထိ မြင့်တက်လာကြောင်း သိရှိရသည်။
ဝူဟန်မြို့နေထိုင်သူ မည်သူမဆို #နိုဗဲလ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရသည်ဟု #သံသယဖြစ်ရလျှင်၊ #သို့မဟုတ် #ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရသူနှင့် #နီးကပ်စွာနေထိုင်ခဲ့ဖူးလျှင် သတ်မှတ်ပေးထားသည့် #Quarantine Centre သို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း ခံရမည်ဖြစ်သည်။ ဝူဟန်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ ယခုထုတ်ပြန်လိုက်သော အမိန့်မှာ ဗိုင်းရပ်စ် ပထမဆုံးတွေ့ရှိရာ မြို့တော်တွင် ရောဂါပြန့်ပွားမှု့ နှေးကွေးမည့် အရိပ်အယောင် မရှိကြောင်း ပြသနေသည် ဆို၏။
#သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူက #ကိုယ်အပူချိန်မြင့်တက်ဖျားခြင်းနှင့် #အဆုပ်ရောင်နမိုးနီးယားဖြစ်ပွားခြင်းကဲ့သို့ #ရောဂါအမည်ဖော်ထုတ်နိုင်သူများသည် #Isolation sites “ #သီးခြားခွဲခြားထားသည့်စခန်းများ ” သို့ အထူးသီးသန့် စီစဉ်ထားသည့် ယာဉ်များဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လူနာတို့သည် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပြီး၊ ငြင်းဆန်သူ မည်သူမဆို ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားသုံးရလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း မြို့တော်အရေး ပေါ်ကွပ်ကဲမှု့ ဋ္ဌာနချုပ်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။
သို့သော် ချက်ချင်းလိုက်နာရန် တရုတ်အစိုးရ၏ ယခုအမိန့်ထုတ်ပြန်ချက်တွင် Quarantine Sites မည်မျှရှိသည်ဆိုခြင်းနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခြင်းခံရသည်ဟု သံသယရှိသူအရေအတွက်ကို ဖော်ပြထားခြင်း မရှိချေ။ အဆိုပါ Quarantine ခံထားရစဉ်အတွင်း လူနာအနေဖြင့် ဆေးဝါးကုသစရိတ်၊ အစားအသောက်နှင့် နေရာထိုင်ခင်းတို့အတွက် ကျသင့်ငွေ ပေးချေရန် မလိုပဲ၊ ကြည့်ရှု့စောင့်ရှောက်သူ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတို့က လိုအပ်သည်ဟု ယူဆချိန်အထိ စခန်းအတွင်း နေထိုင်ကြရမည်ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားလျှက်ရှိစဉ် အိမ်နီးချင်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက “လူထုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အရေးပေါ်အခြေအနေ” ကို ကြေညာလိုက်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံနှင့် လေယာဉ်အဝင်-အထွက်အားလုံးကို တားမြစ်လိုက်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်သည်ဟု South China Morning Post အခြား သတင်းတစ်ပုဒ်တွင် တွေ့ရှိရသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၁၄-ရက်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိခဲ့ဖူးသူ နိုင်ငံခြားသားခရီးသည်အားလုံးကို ဗီယက်နမ်အစိုးရက ဗီဇာထုတ်ပေးခြင်းမှ ဆိုင်းငံလိုက်သည်။
အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကမူ တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းရှိ နာတူနာကျွန်းပေါ်မှ နိုင်ငံခြားသား ၁-ဦးအပါအဝင် ၎င်းနိုင်ငံသား ၂၃၈ -ဦး ကို စစ်ဖက်အစီအစဉ်ဖြင့် ပြန်ခေါ်ခဲ့ပြီး၊ Quarantine စခန်းတွင် ၂-ပတ်ကြာနေထိုင်ရန် ပို့ဆောင်လိုက်ကြောင်း South China Morning Post ၏ ယနေ့ အခြားသတင်းတစ်ရပ်၌ တွေ့ရှိရသည်။ ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဝင်ထွက်လေယာဉ်အားလုံးကို ယာယီတားမြစ်လိုက်ကြောင်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
(( ကာယံရှင်တရုတ်က ဝူဟန်မြို့နေအားလုံးတွင် ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ကြောင်း သံသရှိလျှင်၊ ကူးစက်ခံရသူနှင့် နီးကပ်စွာနေထိုင်ခဲ့ဖူးလျှင် Quarantine Site သို့ ပို့ပါသည်။
အခြားနိုင်ငံများကမူ အထက်တွင်ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း လွန်ခဲ့သည့် ၂-ပတ်အတွင်း တရုတ်သု့ိ ရောက်ရှိခဲ့ဖူးသူ၊ ကိုယ်အပူချိန်မြင့်တက်ဖျားနာ၊ ချောင်းဆိုး၊ လည်ချောင်းနာသူ မည်သူမဆို 2019 n-CoV လက္ခဏာဖြစ်၍ ဗိုင်းရပ်စ်အမှန်ဟုတ်-မဟုတ် #ပြည်ပဓါတ်ခွဲခန်းသို့ ပို့ရသည့်တိုင် ၂-ပတ်ကြာစောင့်ကြည့်ရန် Quarantine မည်။
ရောဂါအမည်ဖော်ထုတ်နိုင်လျှင်သာ Isolation Cases အဖြစ်ပြောင်းသွားပြီး သီးခြားဋ္ဌာနသို့ ပို့မည်ဖြစ်သည်။
သများ သားသမီးတေများ တော်လတ်ထာ၊ Quarantine , Isolation နှစ်လုံးတည်းနဲ့ တိုင်ပတ် မနေပု ။ ။ သတင်းဘာသာပြန်သူ )))
((( South China Morning Post.,2Feb, 2020, “Coronavirus suspects in Wuhan ordered to go to quarantine zones. By: Liu Zhen. “ “Coronavirus: Vietnam backtracks on Hong Kong flight ban, restricts travellers from mainland China.” ကို #HtayOung #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက် နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ ဆက်စပ်ဖော်ပြပါများသည် ပေးထားသည့် Links များအတိုင်း ဖြစ်သည်။ )))
#တရုတ်QuarantineZone #ဗီယက်နမ်လူထုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာ၊ #တရုတ်နှင့်ဝင်ထွက်လေယာဉ်အားလုံးကိုဗီယက်နမ်နှင့်အင်ဒိုနီးရှားတို့တားမြစ်
Previous Previous post: ဖိလစ်ပိုင်ရှိ ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရသူ ၂-ဦးအနက် ၁-ဦး သေဆုံး၊ တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ပထမဆုံး သေဆုံးသူဖြစ်လာ။ ဆေးရုံတွင် ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ကောင်းလာပြီးမှ ၂၄-နာရီအတွင်း သေဆုံးခြင်းဖြစ်
Next Next post: သူများ သားသမီးတွေ ဘာလုပ်နေသလဲ လေ့လာပါ။